Aqriso Duqeymaha Mareykanka ka fuliyeen Somalia Xiliyada ay dhaceen iyo Magacyada Saraakiisha lagu dilay. | Radio Baidoa
Guriga Wararka Idaacada Aqriso Duqeymaha Mareykanka ka fuliyeen Somalia Xiliyada ay dhaceen iyo Magacyada Saraakiisha...
Aqriso Duqeymaha Mareykanka ka fuliyeen Somalia Xiliyada ay dhaceen iyo Magacyada Saraakiisha lagu dilay.
Dowlada Mareykanka oo Dagaal Xoogan kula jirto Ururo argagaxiso ay ku jiraan Al-Shabaab ayaa Gudaha Soomaaliya waxa ay ka fulisay weeraro kala duwan oo lagu dilay Hogaamiyaal iyo Saraakiil katirsan Xarakada Al-Shabaab.
Weerarada ay Dowlada Mareykanka ka fulisay gudaha Soomaaliyaayaa inta badan loo adeegsaday diyaaradaha aan Duuliyaha laheyn, waxaana gantaalo ay soo rideen Diyaaradahaasi lagu dilay Hogaamiyaal iyo saraakiil katirsanaa Al-Shabaab.
Mareykanka ayaa sidoo kale ku fashilay dhoor Weerar kale ay ku doonayeen in ay ku dilaan ama kusoo qabtaan Saraakiil katirsan Xarakada Al-Shabaab , waxaana Duqeymaha Mareykanka geestay intooda badan ka dhaceen Gobolka Sh/Hoose
Aqriso Waqtiyada Duqeymaha ay Dowlada Mareykanka ka fulisay Gudaha Somalia iyo Magacyada Saraakiisha Shabaab ee lagu dilay
May 1, 2008: Waxaa Magaalada Dhuuso Mareen Duqeyn Mareykanku ka geesteen lagu dilay Hogaamiyihii Al-Shabaab Aden Hashi Ayrow .
Sept. 14, 2009: Saleh Ali Nabhan, oo katirsanaa Hogaanka sare ee Al-Shabaab iyo Al-Qaacida ayaa lagu dilay Duqeynka dhacday agagaarka Degmada Baraawe.
Jan. 22, 2012: Duqeyn ka dhacday Duleedka Muqdisho waxaa lagu dilay Bilal Berjawi oo ahaa nin heesta Dhalshada Dalka Ingiriiska.
Feb. 24, 2012: Waxaa sidoo kale Duqeyn ka dhacday Gobolka Sh/Hoose lagu dilay Sheikh Ibrahim Abu Uhud, oo ahaa nin Jihaad doon ah kana soo jeeday Dalka Maroko.
Oct. 28, 2013: Ibrahim Ali Abdi “Anta Anta” oo kamid ahaa Saraakiisha sar sare ee Al-Shabaab ayaa lagu dilay Duqeyn ka dhacday meel ku dhaw Degmada Jilib ee Gobolka Jubada Dhaxe.
Jan. 26, 2014: Diyaaradaha aan Duuliyaha laheyn ee Dowlada Mareykanka ayaa Duqeyn ku dilay Ahmed Abdulkadir Iskudhuuq, oo kamid ahaa la Taliyaasha Hogaamiyihii Al-Shabaab ee Axmed Godane.
Sept. 1, 2014: Duqeyn ka dhacday Meel ku dhaw Degmada Sablaale ee Gobolka Sh/Hoose ayaa lagu dilay Hogaamiihii Xarakada Al-Shabaab Ahmed Abdi Godane oo sidoo kale loo yaqaanay Sheekh Muqtaar Abuu Zubeyr.
Dec. 29, 2014: Duqeyntii ugu Dambeysay ee Mareykanku ka fuliyay Gudaha Soomaaliya lana beegsaday Al-Shabaab ayaa lagu dilay Abdishakur Tahlil oo la sheegay in uu ahaa Madaxa Sirdoonka iyo Amniyaadka Al-Shabaab.